Ntinye aka na ntanetị: Netglobalbooks | Martech Zone
Ntinye aka na ntanetị: Netglobalbooks
Ihe na-esote na ndepụta ntinye blog bụ Linda Lee na Netglobalbooks blog. Linda bụ onye ọchụnta ego na nne naanị ya na 3 nwere ụmụaka. Linda malitere ire akwụkwọ na ihe eji egwuri egwu na tiketi egwu na eBay, nke a na-eduga n'ide na ire ebook na ịmepụta weebụsaịtị.
Linda blọọgụ mara mma - yana isiokwu Paintbrush site n’aka Antbag.
Ndị a bụ ndụmọdụ Blog gị, Linda:
Aga m akwado ịkwalite mbipute gị WordPress na nke kachasị ọhụrụ na nke kachasị ukwuu.
Achọtara m ihe ole na ole na isiokwu gị. Na peeji ndekpu isi gị, post gị malitere> p /> ma ọ dị ka enwere ụfọdụ mkpado ederede na-emegharị onwe ha mgbe ọdịnaya post ọ bụla.
Ga-enwerịrị ike ịchọta mkpado ederede rogue site na ịdezi ibe ndepụta gị na nchịkọta akụkọ isiokwu WordPress. The funky p tag nwere ike ịbụ na ọdịnaya gị.
Nwere njikọ nwụrụ anwụ na ọgbakọ na blogroll gị na sidebar gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ otu nnọkọ na-arụ ọrụ na WordPress, ịnwere ike ịnwale bbPress. My blogging enyi Tony Chung ka ọ kwadoo na-agba ọsọ nke ọma na ya na saịtị, Geekwhat.
Achọpụtara m mgbe ị na-ede na ị nwere ngwakọta nke mkpado paragraf (> p>) na nkwụsịtụ akara (> br />). A akara ezumike ga-agbaji ahịrị ma gaa n'ihu na akara na-esote na-enweghị padding ma ọ bụ oke. A paragraf; Otú ọ dị, na-ahapụ ụfọdụ padding mara mma n'elu na n'okpuru paragraf gị nke ọdịnaya. Paragraf na-emebi ọdịnaya nke ọma - na-eme ka ọdịnaya gị dị mfe ọgụgụ. M ga-ezere nkwụsịtụ ahịrị.
Enweghị akara data meta na nkụnye eji isi mee gị. Meta na-eji data Search eme ihe iji gosipụta isiokwu na nkọwa nkọwa banyere saịtị gị na ibe gị ọ bụla. Akwadoro m itinye ihe ntinye dị iche iche iji nyere gị aka ịtọ ntọala gị na nkọwa mkpado meta!
Edere akara ngosi RSS gị nke ọma! Iji jide n'aka na ị na-adọta ọgụgụ isi site na ndepụta RSS gị, aga m akwado ịbanye maka Feedpress na itinye ihe na mgbakwunye WordPress ngwa nri Feedburner.
Iji nyere aka Nchọgharị Nchọgharị na ịnyagharị na blọgụ gị dị mfe karị, aga m akwado ịkwado itinye a Sitemap generator ngwa mgbakwunye. My ọkacha mmasị bụ n'ezie beta version - ọ na-agba ọsọ nke ukwuu na enwebeghị m nsogbu. Ebe ọ bụ na blọọgụ gị dị na subdirectory, mgbe ị na-ewu saịtị saịtị gị, kpachara anya imelite faịlụ robots.txt gị na ebe ị ga-ahụ ya:
Ọ bụrụ na ị banye na nsogbu, banye na Njikwa Nchọta Google iji nweta ụfọdụ Atụmatụ!
Ọnye na-bụ Linda Lee? Ebee ka a foto? Ebee ka foto ọ bụla dị? De blọgụ dị ka ahụmịhe ọhụụ dị ka ịgụ ihe. Ndị mmadụ na-ejikọkarị ndị mmadụ nke ọma, ọ bụghị ederede. Enweghị m foto na isi m n'ihi na m bụ onye narcissist… Enwere m ya ebe ahụ ka ị nwee ike icheta ihu m ma nwee ike ịtụkwasị m obi karịa.
M ga-efesakwa ihe ederede gị na clipart ma ọ bụ ihe oyiyi iji mee ka ọ dị iche na blọọgụ ndị ọzọ ma nyekwuo nghọta gị ọdịnaya. Jiri otu mgbọ na isi (h2, h3) n'ime ọdịnaya gị ka ndị na - agụ ya nwee ike nyocha ya ọfụma.
Linda, ị na-arụ ọrụ dị egwu na ụdị blog a. Ikwesighi itufu ihe ndozi a niile n'abali abali - were oge. O yiri ka ị na-enwe obi ụtọ n'ihe ị na-ede na ọ na-ezi ozi ma na-enye ihe ọmụma. Debe ya ma tinye di na nwunye ole na ole n'ime oge - ị ga - enweta mmụba n'ịgụ akwụkwọ yana inyocha injin nchọta.
Jisie ike! (Site na Nna Na-enweghị Nanị Nna!)
Otu esi enweta Blog gị
Ọ bụrụ na Blog gị ga-amasị gị Enyere, soro ntuziaka na m Bipute Ntinye Blog.
Tags: ntinye ederedendụmọdụ bloglindaakwụkwọ ntanetị
Corporate Blogging: Top Ajụjụ iri sitere na ụlọ ọrụ
Ntuziaka Blog Tipping: My Blog Coach nke Shonnie Lavender
Julaị 19, 2007, elekere 10:35 nke ehihie
wow doug, M ebudatara na sitemap generator ngwa mgbakwunye na dị egwu, M na-ezigara m sitemap na google, o yiri ka ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè otú thanx ọzọ maka gị advices… also I'm making some changes to my homepage, after reading at your lasts. blog tippings , echere m na m na-akawanye mma 🙂
Julaị 19, 2007, elekere 11:16 nke ehihie
nkume bbpress! daalụ maka okwu Doug!
Julaị 20, 2007, elekere 7:00 nke ehihie
Chaị, daalụ maka enyemaka niile na nnukwu njikọ na aro.
M na-arụ ọrụ na ụfọdụ ndị taa na m na-arụ ọrụ na foto, m na emelitere m banyere ibe.
M ga-wụnye plugins ị dụrụ ọdụ na m mere a blog ntinye banyere gị!
Ị nọkwa na mpịakọta blọgụ m ugbu a.
Daalụ ọzọ maka ihe niile!
Julaị 21, 2007, elekere 2:09 nke ehihie
Daalụ Linda! Daalụ nke ukwuu maka ịgbakwunye m na blọọgụ - nke ahụ bụ nnọọ otuto !!!
Julaị 26, 2007, elekere 2:46 nke ehihie
Azụtara m akwụkwọ dabere na nhọrọ gị.
Ọ dịtụbeghị mgbe m nụrụ banyere nwoke a na m gụrụ Amazon reviews na nke a bụ ụdị akwụkwọ m. "Chere ihe a na-atụghị anya ya"
(Agara m eBay zụta ya, ndo maka nke ahụ) mana etinyere m ya na weebụsaịtị m maka ire ere site na Amazon.
Septemba 28, 2007 na 3:55 ehihie
Roger nwere ya onwe gi, kwa! Ọ bụ nwoke na-atọ ụtọ n'ezie. Ahụrụ m akwụkwọ ahụ n'anya, n'agbanyeghị!
Daalụ maka ime ka m mara!